အလွအပ – My Doctor
You are here:Home-All Articles-အလွအပႏွင့္ေနထိုင္စားေသာက္မႈပုံစံ-အလွအပ
By editor|2019-12-13T04:52:52+00:00December 13th, 2019|Categories: All Articles, အလွအပ, အလွအပႏွင့္ေနထိုင္စားေသာက္မႈပုံစံ|
🔖ခေါင်းခဏခဏလျှော်ရင် ဆံသားပျက်စီးတတ်လား🔖 ဆံပင်ဆိုတာ မျက်နှာအလှအပကို ပံ့ပိုးပေးတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်သလို ဖုန်တွေ အမှုန်အမွှားတွေ လာကပ်ဖို့ လေထဲမှာတလွင့်လွင့်နဲ့ အဆင်သင့်စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ သက်ရှိဖုန်စုပ်စက်လေးလို့ ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ တချို့မိန်းကလေးတွေကတော့ တစ်ပါတ်မှာ ဘယ်နှကြိမ် ဘယ်နေ့ဆိုရင်တော့ ခေါင်းလျှော်မယ်ဆိုတာမျိုး အမြဲ အစီအစဉ်နဲ့ လုပ်လေ့ရှိပေမဲ့ တချို့ကျ လျှော်ချင်စိတ်ပေါ်မှ အနံ့အသက်မကောင်းတော့မှ လျှော်တတ်ပါတယ်။ တချို့ကတော့ နေ့တိုင်းနီးပါးကို ရေချိုးတိုင်း ခေါင်းလျှော်တဲ့အကျင့်ရှိတတ်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ယောကျ်ားလေးတွေနဲ့ ဆံပင်သိပ်မရှည်သူတွေပေါ့။ ဆံပင်သန့်ရှင်းရေးကို ဂရုစိုက်နေရင်း တပြိုင်တည်းမှာ မမေ့သင့်တဲ့ အချက်ကတော့ ဒီဆံသားတွေဟာ သံမဏိနန်းကြိုးမျှင်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့ လျှော်လွန်းရင်လည်း ပျက်စီးတတ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ 🔼ဘာကြောင့် ခေါင်းမကြာခဏလျှော်ရင် ဆံသားပျက်စီးတာလဲ ?? ခေါင်းလျှော်ရည်တွေရဲ့ အဓိက အလုပ်ကတော့ ချွေး၊
By tayzar|2019-11-04T09:55:18+00:00November 4th, 2019|Categories: All Articles, အလွအပ, အလွအပႏွင့္ေနထိုင္စားေသာက္မႈပုံစံ|
အရေပြားမှာ ဖြစ်ပေါ်တက်သောရောဂါများအကြောင်း အရေပြားဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အကြီးဆုံးနေရာယူထားတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သလို ဖြစ်နိုင်တဲ့ရောဂါတွေကလည်း စုံလှပါတယ်။ ?အရေပြားရောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းတွေက ဘာတွေလဲ ?? ◾ရောဂါပိုးများ - မှိုကြောင့် ညှင်း၊ပွေး၊ခြေဝဲစားခြင်း..စတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လိမ်းဆေး၊ သောက်ဆေးတွေရှိပေမဲ့ ကုသချိန်ကြာတတ်ပြီး ချက်ချင်းမပျောက်နိုင်လို့ စိတ်ရှည်ရှည်ကုဖို့လိုပါတယ်။ - ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတွေကြောင့် ရေယုန်၊ ရေကျောက်၊ ကြွက်နို့၊ ကလေးငယ်တွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ hand foot and mouth disease (HFMD) လို ရောဂါတွေ အဖြစ်များပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို မြန်မြန်နှိမ်နင်းနိုင်ဖို့အတွက် ကိုယ်ခံအားစနစ်မြှင့်တင်ပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ - ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကြောင့် ဝက်ခြံ၊ ပြည်တည်နာ၊ အနာပဆုပ် စတာတွေ အဖြစ်များပြီး
By tayzar|2019-11-02T15:13:54+00:00November 2nd, 2019|Categories: All Articles, အလွအပ, အလွအပႏွင့္ေနထိုင္စားေသာက္မႈပုံစံ|
?အရေပြားယားယံမှုကို ထိန်းသိမ်းနည်း? အချစ်နဲ့ ယားယံခြင်း ဆိုတာ အောင့်ထားလို့မရတဲ့ အရာတွေထဲမှာ ထိပ်ဆုံးမှာရှိပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်မိလာရင် မနေနိုင်မထိုင်နိုင် မူပျက်လာတတ်သလိုပဲ ယားယံလာပြီဆိုရင်လည်း မကုတ်ဘဲမနေနိုင်အောင် ဂဏှာမငြိမ် ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ မချစ်ဖူးတဲ့လူမရှိသလို မယားဖူးတဲ့လူလည်းမရှိပါဘူး။ အခုတော့ ယားယံခြင်းအကြောင်း နည်းနည်းပြောပြပါမယ်။ အချစ်အကြောင်းကတော့ နောက်မှ ကြုံရင်ပေါ့။ ?ယားယံစေတဲ့ အကြောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဓာတ်မတည့်တာ ၊ အရေပြားရောဂါနဲ့ ယားနာတွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလို တခြားရောဂါတစ်ခုခုရဲ့ လက္ခဏာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ယားယား ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကို ရှာဖွေကုသမှ တကယ်ထိရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာကြောင့်ပဲ ယားယား မြန်မြန်အယားပျောက်ပြီး သက်သာစေဖို့ ဒီအချက်လေးတွေ လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ - လုံးဝမကုတ်မိအောင် လက်ကိုထိန်းပါ။
ရေနွေးနဲ့ ခေါင်းလျှော်ရင် ဆံသားပျက်စီးနိုင်လား
By tayzar|2019-11-02T10:49:17+00:00November 2nd, 2019|Categories: All Articles, အလွအပ, အလွအပႏွင့္ေနထိုင္စားေသာက္မႈပုံစံ|
?ရေနွေးနဲ့ ခေါင်းလျှော်ရင် ဆံသားပျက်စီးနိုင်လား? ခေါင်းလျှော်ခြင်းဆိုတာ လူနေမှုဘဝရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ တချို့ကတော့ ဘာရယ်မဟုတ် ခေါင်းလျှော်ရည်မရွေး ရေအေး ရေနွေးမရွေး လျှော်လိုက်ကြပေမဲ့ တချို့လူတွေမှာတော့ ဘယ်တံဆိပ်မှ ရေအေးမှ ရေနွေးမှ ဆိုတဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်လည်း ရွေးချယ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်ရည်တွေမှာလည်း ပါဝင်ပစ္စည်းပေါ်မူတည်ပြီး အားသာချက် အားနည်းချက်တွေရှိသလို ရေအေး ရေနွေးမှာလည်း ထို့အတူပါပဲ။ ဘယ်အရာမဆို အလယ်အလတ် လမ်းစဉ်ကသာ အကောင်းဆုံးမို့ ချင့်ချိန်သုံးစွဲဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ ?ရေနွေးနဲ့ခေါင်းလျှော်ရင် ဘာတွေဖြစ်မလဲ ?? ကောင်းတဲ့အချက်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ ရေနွေးက ချွေးပေါက်တွေကို ပွင့်စေပြီး ဂျီးကျွတ်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆံသားနဲ့ ဦးရေပြားကို ပိုသန့်ရှင်းစေပါတယ်။ မကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ အညစ်အကြေးတွေနဲ့အတူ
By tayzar|2019-11-01T09:42:30+00:00November 1st, 2019|Categories: All Articles, အလွအပ, အလွအပႏွင့္ေနထိုင္စားေသာက္မႈပုံစံ|
?ဆံပင်နှစ်ခွဖြစ်ခြင်း? ဆံသားနှစ်ခွဖြစ်ခြင်းဆိုတာ ဆံသားပျက်စီးခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဆံသားထိပ်ဖျားတွေ နှစ်ခွဖြစ်လာတတ်သလို အမွှာမွှာ ဖွာထွက်လာတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဆံပင်အလှအပလည်း ထိခိုက် စိတ်တွေလည်းရှုပ်ရပြီပေါ့။ ?ဘာကြောင့် ဆံသားပျက်စီးပြီး နှစ်ခွဖြစ်ရတာလဲ ?? ◾အပူဒဏ် နေပူဒဏ်ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သလို ဆံပင်ကောက်ခြင်း ဆံပင်ပုံသွင်းခြင်းတွေမှာ အသုံးပြုရတဲ့ အပူဒဏ်တွေကြောင့်လည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ◾ဓာတုပစ္စည်း ဆံပင်ဆေးဆိုးခြင်း ပေါင်းတင်ခြင်းတွေကို အလွန်အကျွံလုပ်မိတဲ့အခါမှာလည်း ဓာတုပစ္စည်းတွေကြောင့် ဆံသားကို အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ အပေါ်ယံအလွှာကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေပြီး ဆံသားတွေ ဖွာထွက်လာစေတတ်ပါတယ်။ ◾အခြားအကြောင်းရင်းများ ဆံပင်တွေရှုပ်ထွေးနေချိန်မျိုးမှာ ဘီးနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းဖီးချတာမျိုး၊ မလိုအပ်ဘဲ ခေါင်းခဏခဏဖီးနေတာမျိုးတွေကလည်း ဆံသားပျက်စီးပြီး ဆံပင်နှစ်ခွဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ဆံပင်သပ်တင်တာကြောင့်တော့ ဆံသားနှစ်ခွ မဖြစ်စေပါဘူး။
By tayzar|2019-10-29T14:17:50+00:00October 29th, 2019|Categories: All Articles, အလွအပ, အလွအပႏွင့္ေနထိုင္စားေသာက္မႈပုံစံ|
ေခြၽးေပါက္က်ယ္ျခင္း ေခြၽးေပါက္ဆိုတာ အေရျပားေပၚက အေပါက္ေသးေသးေလးေတြျဖစ္ပါတယ္။ အေရျပားေအာက္က ေခြၽးနဲ႔ အဆီဂလင္းေတြဟာ ဒီအေပါက္ကေလးေတြကတဆင့္ ေခြၽးေတြ အဆီေတြကို ထုတ္လႊတ္ေပးရပါတယ္။ ဒီေခြၽးေပါက္ကေလးေတြဟာ အသားအေရလွပေရးမွာ အေရးႀကီးတဲ့ ေနရာက ပါဝင္ေနပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လူေတြမွာ ေခြၽးေပါက္ေတြက ပံုမွန္ထက္ ပိုက်ယ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ပံုမွန္ထက္ ပိုအဆီျပန္တဲ့ အသားအေရေတြ ျဖစ္ေစတာေပါ့။ ?ေခြၽးေပါက္က်ယ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ?? - ဝက္ျခံ - အဆီထုတ္လုပ္မႈမ်ားရင္ - အဆီမ်ားတဲ့ မိတ္ကပ္ေတြ - ေနေလာင္ဒဏ္ စတဲ့ အခ်က္ေတြေၾကာင့္ ေခြၽးေပါက္ေတြက်ယ္လာေစပါတယ္။ ?ေခြၽးေပါက္က်ယ္ရင္ ဘာလုပ္ရမလဲ ?? - မိမိသံုးေနတဲ့ skin care ေတြကို
By tayzar|2019-09-27T15:43:30+00:00September 27th, 2019|Categories: All Articles, အလွအပ, အလွအပႏွင့္ေနထိုင္စားေသာက္မႈပုံစံ|
အလွအပေပၚက်န္းမာေရးက ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိလဲ အလွအပလို႔ေျပာလုိက္တာနဲ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ ဆိုင္ေနမယ္လို႔ သိတဲ့သူက နည္းပါေသးတယ္။ တစ္ကယ္ေတာ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ အလွအပဆိုတာ ခြဲလို႔မရတာ အတြဲ တစ္တြဲလိုပါပဲ။ က်န္းမာေရးလိုက္စားရင္း လွေနပေနသူေတြကို ေတြ႕ဇူးၾကမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္မိုလို႔ ဒီေန႔ ဒီစာေလးမွာ အလွအပနဲ႔ က်န္းမာေရးဘယ္လို သက္ဆို္င္ေနလဲဆိုတာကို ရွင္းျပေပးပါရေစေနာ္ ... အလွအပနဲ႔ က်န္းမာေရး ဘယ္လိုဆက္ႏြယ္ေနလဲဆိုတာကို GYM ေဆာ့တဲ့ သူေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္လည္း သိႏုိင္ပါတယ္။ GYM ဆိုတာက ေလ့က်င့္ခန္းတစ္ခုျဖစ္လုိ႔ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အရမ္းကိုေကာင္းတဲ့ အေလ့အက်င့္ တစ္ခုပါ။ GYM ေဆာ့တဲ့သူ ေတာ္ေတ္ာမ်ားမ်ားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သက္လံုေကာင္းတာေတြ႕ရပါတယ္။ အဆီနည္းၿပီးေရာဂါကင္းတာကိုလည္း လူတိုင္းသတိထားမိၾကမွာပါ။ ထို႔အတူပဲ အလွအမ ရွဴေထာင့္ကေနၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း